Chelsea Oo Xalay U Dabaaldegtay Guushii La Liga Ee Real Madrid, Faa'idada Ugu Jirta & Ganacsiga Ay Ka Sameeyeen Eden Hazard - Gool24.Net
Chelsea Oo Xalay U Dabaaldegtay Guushii La Liga Ee Real Madrid, Faa’idada Ugu Jirta & Ganacsiga Ay Ka Sameeyeen Eden Hazard
July 17, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kooxda Chelsea ayaa qudheedu xalay farxad weyn ka heshay inay Real Madrid kusoo guuleysatay horyaalka ugu xiisaha badan Spain ee La Liga iyagoo ka dhex eeganayay dano ugu jiray heshiiskii ay kaga iibiyeen Eden Hazard.
Real Madrid ayaa suuqii xagaagii hore ee 2019 lacag 100 Milyan oo euro ah kasoo bixisay Hazard kaddib markii uu toddoba sano isku soo muujiyay maaliyada buluuga ah ee Blues.
Laakiin heshiiska uu ugu wareegay Madrid ayaa ahaa mid ay ganacsi cajiib ah ka sameeyay boodhka sarre ee Chelsea iyagoo ku daray qoddobo kala duwan oo ay lacag gunooyin ah ku helayaan.
Labada qoddob ee heshiiska ugu mudnaa ayaa ahaa in Real Madrid ay lacago dheeri ah bixin doonto haddiiba uu Hazard kula guuleysto horyaalka La Liga iyo haddii ay usoo baxaan Champions League.
Sida uu sheegayo il-wareedka Sports Ration, Chelsea ayaa Real Madrid ka helaysa lacag dhan 35 Milyan oo euro oo kala ah 15 Milyan oo euro oo ku xidhnaa inay Champions League usoo baxaan iyo 20 Milyan oo euro oo ahaa inay La Liga ku guuleystaan.
Real Madrid ayaa horeba u xaqiiqsatay inay qayb ka ahaanayso UEFA Champions League xilli ciyaareedka dambe halka guushii 2-1 ka ahayd ee ay xalay ka gaadheen Villarreal ay ku xaqiiqsadeen inay La Liga hanteen.
Lacagtaas oo shaki la’aan soo geli doonta gacanta Blues ayaa wax weyn u tari doonta tababare Frank Lampard oo ku hawlan dib u dhiska safka kooxdiisa Chelsea kahor xilli ciyaareedka dambe.
Xilli ay horeba lacag 105 Milyan oo euro ah ugula soo wareegeen Hakim Ziyech iyo Timo Werner, Chelsea ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayaa Kai Havertz oo Bayer Leverkusen ka tirsan, Ben Chilwell oo Leicester City qayb ka ah iyo Declan Rice oo West Ham u ciyaara.